Sharmarke Cup Toronto 2016
Waxaa magaalada Toronto ka furmay tartan kubadda koleyga oo ay ku loolamayaan ciyaartooyda ay da'dooda ka hooseyso 13 Jiir (U13). Tartankani ayaa waxaa kasoo qeybgalay affar kooxood oo kala ah: Ilamos, Banadir, CYDMS & Xiddigaha.
Tartankani oo ay soo qaban qaabisay Ururka Ilamos ayaa koobkani ugu magac dartay AUN Sharmarke M. Farah Qambi oo dhawaanahan gacan ka gardaran ay ku dishay magaalada Toronto.
Furitaankii ciyaaraha ayaa waxaa kasoo qeybgalay dadweyne aad u tiro badan oo isugu jiray ciyaartooydii hore, Fananiin iyo waalidiin.
Ciyaartii kowaad ee furitaanka waxaa wada ciyaaray kooxda Ilamos iyo CYDMS . Ciyaartani oo xiiso badnayd ayaa Ilamos ay guusha ku raacday 23-19. Kulankii labaad waxaa foodda is daray Banadir iyo Xiddigaha. Labadan kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar aad u farsamo badan ugu dambeyntiina Xiddigaha ayaa ku guuleysatay 30-20.
Kulankii labaad ee Sharmarke Cup ayaa la ciyaaray maanta. waxayna kooxaha u kala badiyeen sida tan: Ilamos 28-14 Banadir. Xiddigaha 33-26 CYDMS.
Affartan kooxood ayaa is wada arki doonaa laba lug "Andata & Ritorno". Labada kooxood ee ugu dhibcaha badan ayaana ciyaarta Final wada ciyaari doonaa.
Kooxahan ayaa ilaa iyo iminka waxay u kala horeyaan sida tan: Xiddigaha & Ilamso min 6 dhibcood. Banadir iyo CYDMS min 0 dhibic. Maqaalkani oo maqal iyo muuqaal "Video" ah iyo dhamaan sawiradii filo goor dhow